Posted by Tranquillus | May 15, 2018 | Kobcin xirfadeed
Waa xaqiiqo maanta, ma nihin nolosheena oo dhan hal shirkad.
Marka markaa ama rabitaanka isbedelka mihnaduhu ay soo baxaan, su'aasha ah qiimeynta kartida ayaa soo baxaysa.
Tani waa tallaabo muhiim ah markaad rabto inaad bedesho xirfaddaada ama aad rabto inaad samayso mashruuc xirfadeed.
Sidaa daraadeed waa kuwan 7 talooyin si aad ugu dhigno xaaladaada dhinacaaga si aad ugu guuleysato qiimeynta xirfadahaaga.
Maxay u sameeyaan qiimeynta xirfadaha?
Qiimeynta xirfadaha waxaa lagu samayn karaa dhowr dhibcood oo ku saabsan noloshaada xirfadeed.
Haddii aad naftaada ku tiraahdo, "Waxaan shaqadayda ku jirey waxaanan doonayaa inaan ka baxsado jadwalka.", "Waxaan rabaa dheellitir dheeri ah oo udhaxeysa xirfaddayda iyo shaqsiyaddayda." Ama "Waxaan doonayaa inaan naftayda iska casilo oo aan bedelo xirfadeyda Tani waa wakhti sax ah? "markaa qiimeynta xirfadaha ayaa loo baahan yahay.
Marka aadan suubin karin su'aalahan ficilka, qiimeynta xirfadaha waxay kaa caawin kartaa inaad si cad u aragto qorshahaaga shaqo.
Talo # 1: Samee xaashiyo xisaabeed waqtiga saxda ah
Samee qoraallo miisaaniyadeed oo aan horumarin karin, waa inaad bixisaa 100%.
Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa waqtiga sanadka marka hawshaadu tahay mid aad u yar.
Waxyaabaha muhiimka ahi waa in aad haysatid wakhti aad ku fekertid si taxadar leh oo aad dib ugu noqotid shaqadaada.
Talo # 2: Warbixinta xirfadahaaga ma maalgeliso
Qiimaha warbixinta xirfadaha u dhexeeya 1200 iyo 2000 euros.
Adiga ayaa ku maalgelin kara, isticmaal DIF (xuquuqdaada qof ahaaneed ee tababarka) ama loo marayo Pôle Emploi.
READ Sidee kuugu guuleysan kartaa inaad isku kalsoonaatid shaqada?
Talo # 3: Doorashada Ururka Xuquuqda
Waxa kale oo muhiim ah in la doorto ururka kaas oo masuul ka noqon doona qiimeynta xirfadahaaga isagoo ogyahay in dhagaysiga, xirfadlaha iyo karti-u-helidda soo-galka ay muhiim u tahay tababarka tayada.
Talo # 4: Helitaanka Wanaagsan Diyaarsan
Aqoonsiga qiimeynta xirfadihiisa waa inuu dib ugu noqdo xirfaddiisa iyo xirfadaha la socota.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad qaadato saamiyada meelaha aad soo jiidatid adiga oo aan lahayn wax xaddidaad ah.
Talo # 5: Tixgeli cawaaqibka
Markaad bedesho shaqadaada ama xirfadaada, tani waxay cawaaqib ku yeelan kartaa dhinacyo badan oo nolosha ah, gaar ahaan marka laga eego qoyska iyo dhaqaalaha aragtida.
Sidaas awgeed waa muhiim, marka mashruuca la dhammeeyo, si sax ah loo cabbiro saamaynta keeni karta dib u habeyn xirfadeed.
Talo # 6: Daraasada Suuqa
Ujeedadu ma aha in la helo shaqo aan sugneyn oo aan degganeyn, markaa ka faa'iideyso layliyo si aad u tijaabiso qaybta iyo eeg haddii ay tani tahay hab lagu kalsoonaan karo oo joogto ah.
Talo # 7: Xirfadaha xirfadahaaga
Qiimeyntu waxay u ogolaataa, waxyaabo kale, in la qaado sheyga xirfaddiisa. Sidaas awgeed way fiican tahay in la isticmaalo markaa kobcinta xirfadahaaga la shaqeeyayaasha.
Qofka wax qora wuxuu noqon karaa mid diidaya marka uu qofku shaqaaleysiiyo dib u heshiisiinta, ujeedadu waa inuu ku adkaysto oo tuso in aad haysato dhammaan xirfadaha looga baahan yahay booska in la buuxiyo.
Talooyinka 7 ee Qiimaynta Xirfadaha Guud Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeGuul ku soo laabashada shaqada ka dib maqnaansho dheer
socdaTilmaamaha si loo helo khayraadka ugu fiican ee lagu baran karo Faransiis